DHEGEYSO-Golaha xukuumadda Puntland oo bogaadiyey in xoolaha lagu kala wareejiyo Galkacyo. – Radio Daljir
DHEGEYSO-Golaha xukuumadda Puntland oo bogaadiyey in xoolaha lagu kala wareejiyo Galkacyo.
Seteembar 23, 2016 12:23 b 0
Garoowe, Sep 23 2016–Golaha xukuumadda dowladda Puntland ayaa kulankoodii caadiga ahaa ku bogaadiyey go’aankii dhowaan dowladda Puntland ka dhaqangelisey magaalada Galkacyo ee lagu joojiyey gaadiidka xoolaha ka keena koonfurta Soomaaliya.
Golaha xukuumadda ayaa sheegay in tallaabadaani ay muhiimad u leedahay dhammaan umadda Soomaaliyeed, uuna sidiisii usii dhaqan gelidoono, waxaa sidoo kale golahu gorfeeyey sidii xoolaha lakala wareejinayo ay u heli lahaayeen biyo iyo baad intaba.
Afhayeenka madaxtooyada dowladda Puntland Cabdullaahi Maxamed Jaamac Quraan Jecel, oo waraysi gaar ah siinayey Radio Daljir ayaa waxa uu sheegay in xukuumaddu ay isku raacday dhismaha siilado qalabaysan oo lagu daryeelo xoolaha mudada lakala wareejinayo.
DHEGEYSO-Wasiirka Deegaanka,*Wax Isbedel ah laguma samayn go’aankii Gaadiidka Galkacyo*.